Vula incwadi kuPeter R. de Vries kwimeko yeNicky Verstappen: UMartin Vrijland
Othandekayo uPeter R. de Vries, ngenomdla omkhulu ndilandele ityala ngamajelo uNicky Verstappen, apho uJos Brech ekholelwa ngokusemthethweni. Ngenxa yokucaca: andiyena umkhuseli kaJos Brech okanye nayiphi na into yokuxhaphazwa ngokwesini okanye umbulali. Nangona kunjalo, kubonakala kunzima ukuba le meko yintsebenzo yengqondo (PsyOp); kuhloswe ukunyusa kwiDNA yedatha kunye nokususa umthetho ovimbela ukusebenzisa i-DNA kuphando apho lufunyenwe khona. Kutheni oku kubonakala ngathi kunjalo? Oku kubonakala ngokukhusela igqwetha uGerald Roethof.
Andithethi malunga nokudala ubungqina kunokwenzeka, ngenxa yokuba ukuba oku kwenza PSYOP, ngoko "ngokwenza umbulali" kuhlala backed up nge ibali elungileyo kwaye wabeka ubungqina (kunye elibambeleyo kuyimfuneko). Akunakusetyenziswa ukujonga oko, kuba awufumani ubungqina. Nangona kunjalo, ukukhusela kukaRoethof kubonisa ngokucacileyo ukuba le yi-PsyOp. Ukuba esi PSYOP (yaye ndiza kukubonisa), oku kuthetha ukuba zidlala indima yingozi xa ukutyhala ngokusebenzisa umthetho esisongela uhlanga. Oko kwenza inxaxheba yakho ibe yinto embi kakhulu. Ngokwenene ungumrhwebi.
U bungqina beSpyOp
Kukho umthetho oseNetherlands othi i-DNA efunyenwe xa imeko A ingasetyenziswanga kwimeko ye-B. Iminyaka engamashumi amabini emva kokufa kukaNicky Verstappen, loo nto ityala ukuba iphela. Oku kungenxa yokuba ityala alinakuthi lithathwe ngokusemthethweni njengecala lokubulala okanye ukubulawa kwabantu, ngenxa yoko kufikelelwe ixesha lokunciphisa. Ngaloo mongo ungacacisa ukuba kuhambelane ngokukhawuleza ukuba umntu osesikrokrayo uvela, kodwa ndiyishiya ngaphandle kwithuba elithile.
UJos Brech wayeza kubakho ngokukhawuleza. Asisoze sigxininisa ngokupheleleyo ibali elo, kuba oko kwanele ngokwenziwe kwiimidiya kwaye asikwazi ukujonga ukuba akusiyo nje ukupenda.
Masiqhubeke sifutshane. Ubulungisa buqokelele i-DNA kaJos Brech kwimeko ekhoyo. Makhe sibize ukuba njengelinye icala A. Kwaye le DNA yayisetyenziswe kwimeko ye-B, ukuba yi-Nicky Verstappen. Okukhethiweyo oku kukuthi (ukuvakalelwa) ukuthengisa kakuhle kubantu, kuba "Ekugqibeleni siye safumana umenzi wobubi bokubulala uNicky Verstappen!"Kodwa oko akuyona into engakumbi nje, kuba ukubulala okanye ukubulawa kwabantu akuzange kuboniswe, njengokuba ukuphathwa kakubi ngokwesondo. Nangona kunjalo, andifuni ukulingwa kwi-PsyOp ukuzulazula kweengxoxo kule ngxoxo. UGerald Roethof wenza oko ngokwaneleyo.
Ubungqina bokuthi uRoethof ngummeli we-PsyOp ngoku kulandelayo: I-DNA efunyenwe xa imeko A ingasetyenziswanga kwimeko ye-B. Lo ngumthetho. Inyaniso elula yokuba akukho namnye ubhikishile kwinkqubo yonke yobulungisa malunga nokusetyenziswa kwe-DNA efunyenwe kwimeko ye-A kwimeko ye-B ibonisa ukuba sijongana ne-PsyOp.
Le show izolo, apho Roethof wakhuthaza kwakhululwa Jos Brech ngokusekelwe iingxoxo eziliqela substantive malunga iphonografi umntwana kuthiwa kwi khompyutha, ingcamango ekufuneka inkxaso DNA ubungqina njalo njalo, nto nje abonisa ukuba eqongeni. Roethof waba Jos Brech ezizezi nangoko kwaye sele ukusuka ngomhla 1 eluvalelweni (njengoko wayeya kuba akukho patsy onokudlala umdlalo), ngokuveza umthetho (leyo esasebenzayo), nto leyo ithi ngokucacileyo ukuba DNA wafumana Icala A, lingasetyenziswanga kwimeko yeB B. Le nto iya kubeka phantsi ngokusemthethweni icala.
Ngokuqinisekileyo unokuthi: "Ewe, kodwa ukuba uJos Brech unetyala, ndiyakuqonda ukuba uMtshutshisi woluntu uphenduka amehlo". Kodwa ngaba mhlawumbi singabuza umbuzo ukuba ngaba le nkundla ye-PsyOp ithetha ukumisa lo mda wezomthetho? Kwaye ingaba yintoni ingxaki kumntu wonke?
Akunjalo kuphela le meko, kodwa nakwiimeko zangaphambili zenzeke ngokukhawuleza ziye zachongwa ngegama lomlingo weDNA. Emva kweminyaka emininzi yophando kunye nentsebenziswano ephikisanayo, ngokukhawuleza ummangali ophelela emva kwemivalo ngesiseko sobufakazi be-DNA. Oku kukunyanzeliswa kakhulu 'ngokwenza umbulali', ukuba kwamkelwe ilizwi elimlingo: iDNA. Siye sitshisa ngokukhawuleza ukuba samkele idilesi yesizwe se-DNA, kuba siye sadlalwa ngengqondo kunye nemicimbi yempembelelo enkulu. Ngokuqinisekileyo uye wadlala indima ebalulekileyo kuPetros, kuba unako ukuthetha ngokugqithiseleyo kwaye udibanisa amazinyo akho kakuhle.
Umdlalo wokudala ingxaki eyakhelwe yedwa, ilandelwa ngokubangela ukuphendula ngendlela ye-hypes yeendaba, uze uqalise isisombululo (Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo), kunokubonakala kungenakonakala. Ungatsho ukuba isiphelo sikhombulula iindlela, ngaba kwakungekhona ukuba injongo yinyani idla into enzulu kunokuba ivale kwaye ibone abantu. Kakade ke bekuya kuba kuhle ukuba onke amatyala okubulala kunye gadalala kufuneka ngoko nangoko isonjululwe DNA, kodwa ngaphandle yokuba ubungqina obuxhasa nangoku kuluncedo kakhulu, kufuneka ukuba sibe mhlawumbi ngokwenene nanini sikhathazeke kungenzeka ntoni le DNA kanye kanye kwiziko lelizwe.
Susa umda we-DNA umda
Kwaye kukho ukubaluleka kwale PsyOp ngokukhawuleza kuba yi-crystal ecacileyo! Ukususwa komda wokusetyenziswa kwe-DNA mhlawumbi kuyinkimbinkimbi yaloo Nicky Verstappen - Jos Brech. Emva kokuba i-DNA ifumaneke ingasetyenziselwa kwikamva elizayo ngaphandle kweyithintelo. Ummeli uGerald Roethof uye wakhathalela loo nto ngokungabandakanyi lo mthetho. Wena, Peter, udlala indima ye-PsyOp master-building master, ne-TV kunye ne-Twitter njengezixhobo zakho ezibalulekileyo. Udlala abantu kwaye uzilungiselele ukwamkela into abangayiboniyo. Ngoko xa i-DNA ikwi-database kazwelonke, urhulumente unokuyenza yonke into nayo. Ewe, imifanekiso ngoku ichazwe ukuba oku kuya kusebenza kuphela kwi-Nicky Verstappen-shishini, kodwa inyaniso kukuba umda sele usuphelile kwaye akukho mntu ubona ukuba yimiphumo.
Ngomntu wonke we-DNA kwi-database yelizwe, urhulumente angafaka iifayile ezipheleleyo zohlobo lwabantu. Oku kuthetha ukuba zonke iimpawu zofuzo zingahlaziywa. Oku kuvunyelwe ukususela ngoku ngoku, kuba umgca wezomthetho (kule ngxaki ususiwe) ususiwe. Ukudibanisa nazo zonke ezinye iinkcukacha ezinkulu ezikuqokelelwa koorhulumente kubantu (cinga ngokuziphatha kweendaba zentlalo, iirekhodi zegulane, ingeniso, iindleko, irhafu, njl), unokuba neefayili kakhulu kwaye udibanisa ukuziphatha kwabantu kwiimpawu zobomi. Ukuba udibanisa oku kwimeko yesimo senzululwazi yangoku kwintsimi ye-CRISPR-CAS ye-genetic 'ukufumana nokubuyisela' ukusebenza ukulungelelanisa i-DNA, umfanekiso ozayo ozayo uqhubeka apho kubakho ukuguqulwa kwabantu.
Wena Petros, unokugxotha oku njengento yokukhohlisa, kodwa kufuneka uvuselele isazela sakho. Ngokomntu, ndicinga ukuba uyazi ukuba yiyiphi i-ajenda engemva kwalokhu. Ngaba uyayenza loo mali kunye ne-BMW yakho enhle?
Umthetho wenkxaso yomzimba uqinisekisile ukuba umzimba usemthethweni ngokwenene ubunikazi bombuso. Unokwenza isigqibo sokuba ngaba ungeke unikezele izitho ekufeni, ngokushiya oku kurejista karhulumente. Kwaye konke okusemgangathweni, urhulumente angaqhuba isondlo. Ngoko ukuba ucinga ngomzimba womntu njengomhlaba wepropati, kwaye unayo ingxelo ye-DNA yabantu, unokugqiba ukugcina (ngaphandle kwemvume). Kwakhona kunjalo nakwizakhiwo zikaRhulumente kunye neendlela zikazwelonke kunye nayo yonke into ewela phantsi kobunini belizwe. Ngokwenene, unokuthi xa ukubola kwenethiwekhi kubonakala, uhulumeni unokuziva ubizwa ukuba ubeke i-asphalt entsha phezu kwayo. Ukuba enye yeepropati zombuso iqala ukubonisa ukuphambuka, urhulumente angakunceda. Ngokomzekelo, ndinokucinga ukuba ufumana abantu abaneendlela zokuvukela ngokusebenzisa ukuhlaziywa kwedatha enkulu. Ukuba ngaba unesiprofayili se-DNA kwisiseko selizwe, ungasebenzisa ngokusemthethweni i-DNA ukwenza isitofu sokugonywa, apho wenza utshintsho kwiDNA ngendlela ye-CRISPR-CAS, ukuze uguqule loo mntu. Unjalo, njengokuba kunjalo, uqhuba isondlo kwifa lakho likarhulumente.
Ngoko ndiyifaka yonke imeko ekulu kunokuba yintoni na le ngxaki kaJos Brech ibonakala ikhonza. Ukubonakala okuvuswa nguwe kunye nabeendaba kukuba kukulungile ukuba sibe ne-DNA yabantu bonke, kuba iimeko ezinkulu zokubulala zingasombululwa kungekudala. Noko ke, iziphumo zikhulu kakhulu. Ngenxa yokuba uGerald Roethof ehluleka ukujongana nokuphulwa komthetho ngokusetyenziswa kwe-DNA kwimeko ye-A ukuze inzuzo yebakala B, ithoni ithathelwe. Iprofayili ye-DNA yomntu ngokukhawuleza iya kuthi nje yipropati kwaye i-state ayisayi kusayi kuba nexhala malunga nombuzo wokusebenzisa oko kulwazi.
Ngoko ukuba unako ukubonisa iingcamango zabantu kwinqanaba lezenhlalakahle, elengqondo ngokusebenzisa ulwazi olubanzi oluvela kumajelo asekuhlaleni kunye nazo zonke iintlobo zenye imithombo yolwazi kwaye udibanisa olo lwazi kunye nedata yeDNA, ngoko luncedo ukuba sele unomthetho oqinisekisa ukuba unako ukugcina ezo zixhobo zelizwe ngaphandle kweyithintelo. Kuyinto efanelekileyo ukuba kukho umthetho owenza ukuba ukwazi ukubeka inaliti yenaliti kuwo wonke ummi; ingaba bayayifuna okanye ayifuni. Ngoko kubonakala ngathi zonke iziqendu ze-puzzle ziza kwenzeka kwaye yonke ingxoxo esiyibonayo ngoku kumajelo eendaba nakwasekuhlaleni isilungele utshintsho oluya kukwazi ukufikelela kwi-DNA yethu.
Ukuba ubeka imephu kwiprofayili yomntu wonke kwaye ungafaka umthetho wokugonywa obangela ukugonywa okunyanzelekileyo kubantu, ngoko unokwenza uguqulelo olusesikweni (CRISPR-CAS) kwiimpahla zakho zelizwe.
Enyanisweni, ndifuna kukubulela, uPeter R. de Vries, ngokubamba iqela elibalulekileyo kulo phuhliso oluhle! Ndingakuthandi ukuba ndingaboni nto ngaphandle kokuba le ngxaki yokuziphendulela kweNtshutshiso, endikukhathazayo, ihlelwe yinkalo yam. Ndiyicinga ukuba uluntu olugcwele iirobhothi oluye lugqithise ewe, lusebenza kangcono. Ndiyicinga ihlabathi apho zonke iintsana ezizenzileyo zifumana u-Peter R. de Vries DNA, ukuze singaboni nje ukumomotheka kwakho kwi-TV okanye A, kodwa yonke indawo! Ndicinga ukuba ihlabathi lizele iipopu ezifanelekileyo zeburhulumenteni, kuba ekugqibeleni imbali ifundisa ukuba amandla akonakalisi kwaye sinokukulawula ukulawula i-DNA yethu kumdlali weepopi.
Ndiyabonga uPetros! Yaye niyanibulisa uGerald.
tags: Dna, eziziimbalasane, Jos B. Jos Brech, xhatshazwa, ityala lokubulala, UNicky Verstappen, zangaphantsi, UPeter R. de Vries, kwimeko
13 Disemba 2018 kwi-13: 50
Ngaba akunakunikwa cc inqaku kummeli uRoerhof. I-mail ye-Ziin kwi-website yakhe ndiyicinga.
Buza imibuzo malunga nokuzikhusela kwakhe?
13 Disemba 2018 kwi-13: 55
Bafunda oku ...
13 Disemba 2018 kwi-16: 23
Musa ukukhathazeka "ngomfanekiso"!
13 Disemba 2018 kwi-19: 04
Kungaba kuhle ukulandela imeko ye "German Maddy" ukufumana ukufana. Ukongezelela, yonke ingqwalasela yeendaba izakukwazi ukucombulula ityala le-English Maddie ngokufanayo.
Arie wabhala wathi:
13 Disemba 2018 kwi-19: 40
Sula uMartin! Ndiyabuza ukuba umntu ongaphandle angatyelela le ndoda entolongweni, okanye ubuncinane ilungu lentsapho. Andiyonto. Kodwa ngaba unelungelo lokutyelela ukuba engazange abe (ngokusemthethweni) enetyala?
13 Disemba 2018 kwi-19: 45
Kubonakala kungenakwenzeka ukuba awukho intsapho okanye into. Akasayi kuphinda anetyala ngaphandle kokuvavanywa ngamaphephandaba.
Kodwa ngokuqinisekileyo ufuna ukugcina i-patsy kumntu wonke kunokwenzeka.
Andiyiboni loo nto.
14 Disemba 2018 kwi-06: 54
Qhagamshelana nolwazi lokuvakatyela abavalelwe
https://www.dji.nl/contact/contactmeteengedetineerde/index.aspx Ufanele ukwazi apho ukhona kwaye kufuneka athethe ukuthetha nawe. Ngoko ayikhangeleki kakuhle ukuba igqwetha lakhe lithintela oku kwimeko yokuzimela 'okuhle'. Kuch, ukukhwehlela ukukhahlela.
14 Disemba 2018 kwi-10: 12
Zonke ijelo: kuyimvakalelo yesihlobo esilandelayo kodwa okwangoku lonke elaseNetherlands kunye neyona ndlela ephezulu kakhulu yobuzenzisi bhinqa iincinci zikaNicky kwi-membrane yamehlo. Sekunjalo nantoni na inyaniso yebali lonke)
Kuyinto edangalisa ukuba loo nto iziswa kwi-17mlj NLérs ngombane weTV kumboniso weTV, ukuba awuyikugula okokuqala. Kwaye kwakhona kwiprogram igama elithi imvakalelo iyanqamla ukuxhamla kwisihlobo esilandelayo, kodwa ngoko-ether uphonsa kunye ne-retina yazo zonke izibukeli. (ukuchithwa kwegama kuthiwa yiyo)
Ukuphikisana malunga neepantshi, izigulane zika-Nicky izigulane zikhankanywe ngokukhawuleza ukuba umdatshi waseDutch kunye nezigulane zikaNicky kwi-retina yakhe ixhomekeke kwaye akukho ndawo ingacinga ngayo. Ubuncinane ukuba usalubona le mpahla epholileyo.
Bona ifilimu kwisikhonkco esingezantsi. Asiboni ukuhlaziywa kwale bhulogi kwiindawo eziqhelekileyo, akukho, sibona kuphela izigulana zegama, wonke umntu othatha inxaxheba kwisakhiwo sakhiwo sazibali ukuba athathe nabo eSpeyin, baya kuhlanza tafrelen ... (Akunakuqondakala ukuba uJeroen Pauw onjalo akanamahloni neentloni ngenxa yokuba uyazi ukuba uguqula i-Vries kunye ne-consorts)
Jonga ifilimu edibeneyo kwinqaku engezantsi kwinqanaba le-Minimum 15.05: ukufowunelwa kweefowuni kunye nexesha elifanayo ukusabalala ulwimi oluvuthayo ezindlebeni zababukeli. (ukuphakama kobuzenzisi)
Kwaye kule phephandaba baphinde bahlaziye malunga neeplastiki zamagama
14 Disemba 2018 kwi-21: 08
Makhe ndongeze inqaku elilungileyo kuyo 😀
15 Disemba 2018 kwi-11: 44
Loo nto u-Vries ewe, yintoni enokufuneka uyenze yona?
Kuvele wabhala wathi:
19 Disemba 2018 kwi-09: 19
Siphinde sibe necala lokubulala elingaxeliweyo elibizwa ngokuba ukuzibulala ngokulula kwiWassenaar. Anass Auragh.
Ingaba abathandi bemvelo basasahlali ekhaya ngeenyanga?
Emva koko le meko ingasombululwa kunyaka we-20.
8 Matshi 2019 kwi-16: 25
Mane ufunde ukuba uRkethof ufuna imali engaphezulu. Usebenza kanzima kwaye uhlawulwa kakhulu kangako. Ewe, ukuba usebenza kule nkqubo, kufuneka ukhonothule ngemithetho esetyenziswa kwimali yakho. Ngoko musa ukukhanya.
Emva koko kufuneka aphume kwaye enze enye into. Kukho amagosa amaninzi amaninzi. Anditsho ukuba ulungile kakhulu js.
Uninzi lwabagwebi ngamagqwetha ehlobo. Anditsho ukuba ungummeli wezombie.
5 Juni 2019 kwi-10: 17
Enye iseshoni namhlanje, nceda uqaphele
Ngoko i-app yokukhangela ilahlekile ngeDNA, kungekhona ngabantu
Ummangali oneminyaka eyi-56 akazange athathe inxaxheba. Kodwa ngenxa yokuba intsapho yakhe ibixelele ukuba ilahlekile kwaye yayithumele izinto ezazisenza i-DNA kumapolisa, kwafika umdlalo we-DNA we-DNA. I-DNA ye-B. ifunyenwe kwiingubo zenkwenkwe.
URoethof ngesimo sengqondo sakhe sobuzenzisi esenza ukuba abe ngummeli,
I-Scripting abadlali abalungileyo bahlawulwa kakuhle kweli hlabathi, ngokwenene bafanelwe iipillory (utamatisi namaqanda, funda inqaku apha ngasentla, ngoko uyazi ukuba kutheni)
« I-Jos Brech: "I-Psyop lawsuit" kuphela emva kwehlobo le2019
Ileta engacatshulwayo evela kuMarko Rutte: Datshi waseDatshi »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.961.998
iifom op Ulutsha lwanamhlanje lufuna ukuzalisa iinkampu zokufunda kwakhona (i-gulags) ngabahambi bemozulu